Forex Kusvitsa | Chii chinonzi Margin uye Kusimudzira mu Forex, Dzidza neFXCC
Forex Mushonga & Margin
Vatengesi vese vanoshandisa yakakweretwa mari neimwe nzira kuti vawedzere iyo inogona kudzoka pane yekudyara. Vashandisi vanowanzo shandisa maakaundi emahara kana vachida kuisa mari mumatanda kana mari, vachishandisa mari "yakweretwa" kubva kune broker kutonga chinzvimbo chakakura kutanga nemari shoma.
Saka vanogona kuisa pangozi dhipoziti diki asi votenga yakawanda, izvo neimwe nzira zvaisakwanisika kwavari. Iwo margin pane Forex inyaya yakakosha kune vatengesi veavice. Naizvozvo, isu tinokurudzira kuongorora muForex uye kutsvaga zvese zvakadzama.
Chii chinonzi Forex margin mumazwi akapusa?
Kana iwe ukasaenda mune zvakadzama, Forex margin ingori danho rekutenga simba iro broker rinokupa iwe pakurwisa dhipoziti yako.
Margin yekutengesa inobvumira vatengesi kuti vawedzere yavo yekutanga nzvimbo saizi. Asi isu hatifanire kukanganwa kuti uyu munondo unocheka nekwose, sezvo uchiwedzera zvese purofiti uye kurasikirwa. Kana fungidziro yemutengo ikaenda zvisizvo, iyo Forex account inowana isina chinhu mukubwaira kweziso nekuti tiri kutengesa yakawanda vhoriyamu.
Nei margin yakakosha kune vanotengesa Forex?
Vatengesi vanofanirwa kutarisisa kumahombekombe muForex nekuti izvi zvinovaudza kana vaine mari yakakwana yekuvhura zvimwe zvinzvimbo kana kwete.
Kunzwisiswa kuri nani kwemahara kwakakosha chaizvo kune vatengesi pavanopinda mune yakakwenenzverwa Forex yekutengesa. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kushambadzira pamucheto kune mikana yakawanda yezvose purofiti uye kurasikirwa. Nekudaro, vatengesi vanofanirwa kuzviziva iwo iwo margin uye mazwi ane chekuita nawo senge kumahombekombe kufona, danho rekumhara, nezvimwe.
Ndeipi iyo margin level?
Chikamu cheMargin ndiyo muzana yemari yako yawakaisa iyo yatove kushandiswa pakutengesa. Ichakubatsira iwe kuona kuti imarii inoshandiswa uye yakawanda sei yasara yekuenderera mberi nekutengesa.
Chii chinonzi yemahara margin mune Forex?
Mahara emahara isimba rinowanikwa rekutenga. Mahara emahara anoverengerwa sekubvisa iyo margin yakashandiswa kubva kumahombekombe akazara.
Yemahara margin muenzaniso
Ngatitii ndine $ 8000 pachiyero changu. Mukutengeserana kwakavhurika, $ 2500 inokweretwa. Mahara emahara ari $ 8000 - $ 2500 = $ 5500. Kana iwe ukaedza kuvhura chibvumirano chisina mari yakakwana yemahara, odha yacho ichadzimwa otomatiki.
Mari uye margin zvine hukama sei?
Kuwedzera uye kumahombekombe mativi maviri emari imwechete. Kana iyo margin iri shoma mari inodiwa kuisa bhizimusi rakaburitswa, saka chishandiso chishandiso chinobvumidza mutengesi kufambisa mijenya mikuru iyo yaisazokwanisika kwaari nemutengo we1: 1. Kuwedzeredza ndiyo "yakawedzera simba rekutengesa" inowanikwa kana uchishandisa Forex margin account. Icho chaicho "chinobata" chemusiyano pakati pezvatinazvo nezvatinoda kuvhiya.
Kuwedzera kunowanzo kuratidzwa mu "X: 1" fomati.
Saka, ini ndoda kutengesa yakajairwa yakawanda USD / JPY isina margin. Ndiri kuda $ 100,000 paaccount yangu. Asi kana margin chinodiwa chiri 1% chete, ini ndinongoda $ 1000 pane dhipoziti. Iyo yekuwedzera, mune ino kesi, ndeye 100: 1.
Ne 1: 1 inoshandisa dhora rega rega mumitemo yako yepamusoro yekambani 1 dollar yekutengesa
Ne 1: 50 inoshandisa dhora rega rega mumitemo yako yepamusoro yekambani 50 dollar yekutengesa
Ne 1: 100 inoshandisa dhora rega rega mumitemo yako yepamusoro yekambani 100 dollar yekutengesa
Chii chinonzi margin kufona, uye maitiro ekuzvidzivirira?
Kudanwa kwemahara ndizvo zvinoitika kana mutengesi apererwa nemahara. Kana paine mari shoma yakaiswa pane inodiwa pasi pemitemo yekuwedzera, mabasa akavhurika mu Forex anovharwa otomatiki. Iyi ndiyo nzira inoganhurira kurasikirwa uye vatengesi havasi kurasikirwa kupfuura yavo yavakaisa huwandu. Vatengesi vanogona kudzivisa margin kufona kana vakashandisa margin zvine hungwaru. Ivo vanofanirwa kudzora yavo saizi saizi zvinoenderana neayo account account.
/ Nzira yekuwana marginal mune MT4 terminal?
Iwe unogona kuona iyo margin, yemahara margin uye nhanho yemahara mune iyo account terminal hwindo. Iri ndiro iro hwindo iro panoratidzwa chiyero chako nekuenzana.
Kuverenga yakanyanya mijenya yekutengesa margin
Iyo yakajairwa Forex yakawanda saizi ndeye zviuru zana zvemari zvikamu. Uine zana: 100,000 zviyero, yega yega $ 100 dhipoziti mune yekutengesa account inokupa iwe kutenga simba re $ 1. Mutengesi anotendera vatengesi kuti vabvise zana remazana zviuru izvi, nepo paine chiuru chaicho pane dhipoziti.
Semuenzaniso, kana tikatenga zviuru gumi zvemari ku10,000 nemari inosvika mazana mana: 1.26484, tinowana zvishoma kudarika $ 400 yemahara anodiwa. Ichi ndicho chidiki kwazvo "chibatiso" chekuvhura bhizinesi muForex.
Muenzaniso wekutengesa margin
Ngatitii mutengesi anovhura account ne broker ane chiyero che1: 100. Anosarudza kutengesa iyo EUR / USD mari vaviri; ndiko kuti, anotenga mumaeuro emadhora ekuUS. Mutengo uri 1.1000, uye mureza wakatarwa iUS $ 100,000. Mukutengeserana kwakajairika, aifanirwa kuisa zviuru zana muaccount yake kuti avhure bhizinesi. Asi kutengesa nekutengesa kwe100,000: 1, iye anongoisa $ 100 muaccount yake.
Achifanotaura kusimuka kana kuderera kwemutengo, iye anovhura kutengeserana kwenguva refu kana ipfupi. Kana mutengo ukaenda mushe, mutengesi achawana purofiti. Kana zvisiri, iko kudhirowa kunogona kupfuura dhipoziti yako. Chibvumirano chichavhara, mutengesi acharasikirwa nemari.
Ehezve, margin kutengesa chishandiso chinobatsira kune avo vari kutsvaga kutengesa Forex nemari shoma yekutanga-up. Kana ikashandiswa nemazvo, kutengesa kwakaburitswa kunosimudzira kukurumidza kuwana purofiti uye kunopa imwe nzvimbo yeiyo portfolio kusiyanisa.
Iyi nzira yekutengesa inogona zvakare kuwedzera kurasikirwa uye inosanganisira dzimwe njodzi. Nekudaro, isu tinopedzisa kuti zvakati omei kupinda mumusika chaiye tisingazive maficha eiyo Forex.
Ngozi yekurasikirwa nemari yese yakanyanya. Kana zviri zvemari yedhijitari nezvimwe zviridzwa zvisina kugadzikana, senge simbi, vatengesi vane ruzivo chete avo vanowanzove nezinga rakanaka uye nhamba dzakabudirira vanogona kupinda muno.
Nenzira, zvichave zvinonakidza kuziva kana iwe uchida Forex, kana iwe uchida kuchinjana nemari yakakwenenzverwa, uye chii chaunofarira chishandiso.